मधेश बिद्रोहको दश वर्ष
त्यसकारण संविधान संशोधन भनेको बिद्यमान ब्यवस्थालाई स्थिरता र निरन्तरता दिने हो। संशोधन भनेको असन्तुष्ठीको सम्बोधन गर्ने प्रक्रिया मात्र हो, चित्त बुझाउने मेसो हो। तपाईहरुले संशोधनलाई इन्कार गरिरहनुभयो भने, एक दिन मधेसले पनि भन्नेछ, हामीलाई पनि संशोधन चाहिन्न, यो संविधान नै चाहिन्न। त्यसपछि के हुन्छ? त्यसपछि आउने असन्तुष्टिको ज्वारभाटाले संविधान मात्र होइन धेरै कुरा फेर्छ। संशोधन अस्वीकार गरेर एमालेले खोजेको त्यही हो?
प्रकाशित मिति: बुधबार, माघ ५, २०७३ ०९:५१:२९